नेकपा विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छी सक्रिय, सामाजिक सञ्‍जालमा चर्को आलोचना - Himali Patrika
नेकपा विवाद मिलाउन चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छी सक्रिय, सामाजिक सञ्‍जालमा चर्को आलोचना
हिमाली पत्रिका २२ असार २०७७, 5:27 am
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै जाँदा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छी सक्रिय देखिएकी छन् ।
यसअघि नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि उनले सक्रियता देखाएकी थिइन् । कतिपयले उनकै सक्रियताका कारण त्यतिबेला नेकपा विभाजन हुनबाट बचेको टिप्पणी गरेका थिए ।
पुनः नेकपा फुटको संघारमा रहेको ठानिएका बेला देखिएको उनको सक्रियतालाई राजनीतिकवृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।आइतबार बेलुकी उनले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेकी थिइन् । भेटमा नेकपाभित्रको पछिल्लो घटनाक्रमबारे उनले चासो राखेको बताइएको छ ।
नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला बढेको याङ्छीको सक्रियताको विषयले सामाजिक सञ्‍जालमा समेत महत्त्व पाएको छ । कतिपयले उनको सक्रियतालाई नेपालको राजनीतिक दलभित्र विदेशी हस्तक्षेपका रुपमा हेरेका छन् भने कतिपयले उनको सक्रियतालाई अस्वाभाविक भनेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले याङ्छीको सक्रियतालाई फेबिकोलको संज्ञा दिएका छन् । उनले ट्‍विट गर्दै भनेका छन्, “कसो नटाँसिएला त ? फेबिकोल नै लाएपछि ! हौ कान्छी !!”
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले याङ्छी सक्रियतालाई विदेशी हस्तक्षेप भनेका छन् । उनले ट्‍विटमार्फत टिप्पणी गरेका छन्, “कांग्रेसको वर्तमान रोडम्याप कांग्रेसकै महाधिवेशन हो । कांग्रेसलाई देखाएर नेकपाका नेताहरुले आपसी झगडा बल्झाउने र एकले अर्कोलाई तर्साउने नगरे हुन्छ। सकेसम्म आफैं मिल्नुस् । नसके चिनियाँ राजदूतको दौडधूप त चलेकै देख्छु। चिनियाँ राजदूतको हस्तक्षेपले कामरेडहरुको राष्ट्रियता त दुख्दैन होला नि !”
अर्का प्रतिपक्षी दल राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठ पनि याङ्छीको सक्रियता विदेशी हस्तक्षेप भएको ठान्छन् । उनले ट्‍विट गरेका छन, “देशको मामिला होस् वा दलको, विदेशीको प्रवेश हस्तक्षेप नै हो, चाहे चीन होस् वा भारत वा अरु कोही !”
त्यस्तै, डा. रामेश कोइरालाले चिनियाँ भाषा नबुझ्‍ने हुनाले राष्ट्रवादमा क्षय त हुन्‍न नि भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । “भाषा नै नबुझ्‍ने हुनाले चिनियाँ राजदूतसँगको भेटघाटले हाम्रो राष्ट्रवादमा क्षय त हुन्‍न नि ? कि के हो कुरो ?” उनको प्रश्न छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झाले नेपालका राजनीतिक दल र नेता आफैं मिल्न सक्दैनन् भन्दै प्रश्‍न गरेका छन् । चिनियाँ राजदूत याङ्छी नेकपाको विवाद मिलाइदिन सक्रिय भएको तर्फ संकेत गर्दै उनले ट्‍विट गरेका छन्, “के हाम्रा पार्टी र नेताहरु यति नालायक छन् कि हाम्रा छिमेकीहरुले तिनलाई कहिले मिलाइदिनुपर्ने र कहिले फुटाइदिनुपर्ने ? हाम्रा दल र नेताको आफ्नो बुद्धिविवेक छैन ?”